China Pụrụ iche arụmọrụ anaghị agba nchara waya rụpụta na Factory | Shougang
Companylọ ọrụ anyị nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 60 na ịmepụta igwe anaghị agba nchara. Site na ịhọrọ ihe ndị dị elu na ịnakwere usoro ịgbaze nke okpukpu atọ nke electroslag + ọkụ na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-ere ọkụ ọkụ, ngwaahịa ndị ahụ dị oke mma na ịdị ọcha na ịdị n'otu. . The usoro nke Ogwe, waya na warara tagzi na-nyere.
Oyi weputara waya
Nzuzo akpọrepu warara
na-ekpo ọkụ akpọrepu warara
Ihe oyi akwa akpọrọ
ọ dịghị ibu karịa
Aha ngwaahịa: 904L
Njirimara nke aru: 904L, njupụta: 8.24g / cm3, ebe agbaze: 1300-1390 ℃
Okpomọkụ ọgwụgwọ: nchekwa ọkụ n'etiti 1100-1150 ℃ maka awa 1-2, ngwa ngwa ikuku jụrụ ma ọ bụ mmiri jụrụ oyi.
Mechanical Njirimara: ike ọdụdọ: σ B ≥ 490mpa, iku ike σ B ≥ 215mpa, elongation: δ≥ 35%, ekweghị ekwe: 70-90 (HRB)
Nguzogide corrosion na gburugburu ngwa ngwa: 904L bụ ụdị austenitic anaghị agba nchara nwere obere carbon ọdịnaya na nnukwu alloying metal, nke ezubere maka ọnọdụ nrụrụ siri ike. Ọ nwere nguzogide nrụrụ ka mma karịa 316L na 317L, ma na-eburu n'uche ọnụahịa na arụmọrụ, ma nwee oke arụmọrụ arụmọrụ. N'ihi ntinye nke 1.5% ọla kọpa, ọ nwere nguzogide corrosion magburu onwe ya maka mbenata acid dị ka sulfuric acid na phosphoric acid. O nwekwara nguzogide mmebi nke nrụgide nke nrụgide nrụgide, nkwụsị nke corrosion na nkwonkwo nsị nke chloride ion kpatara, ma nwee ezi nguzogide mmebi nke intergranular. Na ntinye uche nke 0-98%, ọnọdụ okpomọkụ nke 904L nwere ike ịdị elu dị ka 40 ℃. Na nso nke 0-85% phosphoric acid, ya corrosion eguzogide dị ezigbo mma. Na ulo oru phosphoric acid meputara site na mmiri mmiri, ihe ojoo na enwe mmetuta siri ike na nguzogide corrosion. Na ụdị phosphoric acid dị iche iche, nsogbu mmebi nke 904L dị mma karịa nke igwe anaghị agba nchara. Na ike oxidizing nitric acid, nguzogide corrosion nke nchara 904L dị ala karịa nke akwa nchara nchara na-enweghị molybdenum. Na acid hydrochloric, ojiji nke 904L ejedebere na mgbatị dị ala nke 1-2%. Na ntinye uche a. Nguzogide corrosion nke 904L dị mma karịa nke igwe anaghị agba. 904L ígwè nwere nnukwu iguzogide olulu corrosion. Na chloride ngwọta, ya crevice corrosion eguzogide ike. Ike dịkwa ezigbo mma. Nchịkọta nickel dị elu nke 904L na-ebelata ọnụ ọgụgụ corrosion na olulu na ọnya. Nkịtị austenitic anaghị agba nchara nwere ike na-echegbu nrụgide corrosion na chloride bara ụba gburugburu ebe obibi mgbe okpomọkụ dị elu karịa 60 ℃. Enwere ike belata ihe mmetụta site na ịba ụba ọdịnaya nickel nke igwe anaghị agba nchara. Ruru ya elu nickel ọdịnaya, 904L nwere nnukwu nchegbu corrosion cracking eguzogide na chloride ngwọta, lekwasị hydroxide ngwọta na hydrogen sulfide ọgaranya gburugburu ebe obibi.
Aha ngwaahịa: 304L
Njirimara anụ ahụ: njupụta ahụ bụ 7.93 g / cm3
30L anaghị agba nchara bụ a nkịtị igwe anaghị agba nchara, nke na ọtụtụ-eji dị ka a chromium nickel anaghị agba nchara. Ọ nwere ezigbo nguzogide corrosion, okpomọkụ na-eguzogide, obere okpomọkụ ike na n'ibu Njirimara. Ọ na-eguzogide corrosion na ikuku. Ọ bụrụ na ọ bụ ikuku nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ebe mmetọ dị ukwuu, ọ dị mkpa ka a kpochaa ya n'oge iji zere nrụrụ. Okwesiri maka nhazi nri, nchekwa na njem. Ọ nwere ezi machinability na weldability. Efere okpomọkụ Exchanger, bellows, ngwongwo ụlọ, ụlọ ihe, chemical, ụlọ ọrụ nri, wdg 30L igwe anaghị agba nchara bụ mma nri ọkwa igwe anaghị agba nchara.
Aha ngwaahịa: 309Nb
Njirimara nke aru: ike ọdụdọ: 550MPa, elongation: 25%
Njirimara na ịgbado ọkụ:
309nb nwere rutile acid ụdị mkpuchi na e mere maka nwetụ ugbu a ma ọ bụ nti electrode ịgbado ọkụ. 309nb bụ ụdị 23CR13 Ni alloy，Mgbakwunye nke niobium na-ebelata ọdịnaya carbon ma na-enye ezigbo nguzogide ozuzu carbide, si otú a na-abawanye oke ọka ọka na-eguzogide ọgwụ. Ọ na-enyekwa a elu ike n'okpuru elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi adabara elu okpomọkụ ịgbado ọkụ nke ASTM 347 mejupụtara ígwè ma ọ bụ carbon ígwè maka surfacing ịgbado ọkụ.
309nb nwekwara ike iji maka ịgbado ọkụ dị iche iche obere carbon na igwe anaghị agba.
Product aha: AKA434
Njirimara anụ ahụ: Onu ogugu ike σ 0.2 (MPA): ≥ 205 Elongation δ 5 (%): ≥ 40 Mbelata mpaghara ψ (%): ≥ 50
Okwesiri: ≤ 187hb; ≤ 90hrb; ≤ 200hv
Njirimara nke SUS434 / 436/439 igwe anaghị agba nchara: nchara nnochi anya nke iron ferrite, na obere thermal mgbasa ọnụego, ezi akpụ na ọxịdashọn na-eguzogide. 430 eji dị ka ịkpụzi ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ụgbọala n'ime ime mma panel, na 434 na 436 igwe anaghị agba nchara na-eji mgbe mma corrosion eguzogide chọrọ. 436 bụ gbanwetụrụ ígwè ọkwa nke 434, nke na-ebelata echiche nke "ịkpa aru" na dịtụ nlezianya na-akpụ ọrụ. Ngwa: ikpo ọkụ na-eguzogide ọgwụ, stovu, akụrụngwa ngwa ụlọ, klaasị 2 tableware, tankị mmiri, ịchọ mma, ịghasa na akụ.
Product aha: AKA630/632
630/632 bụ mmiri ozuzo martensitic na-eme ka igwe anaghị agba nchara. Ọ nwere elu ike, elu ekweghị ekwe, ezi ịgbado ọkụ arụmọrụ na corrosion eguzogide. Mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ, ihe ndị na-arụ ọrụ nke ngwaahịa ndị ahụ zuru oke, nke nwere ike iru ike mkpakọ nke 1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Enweghị ike iji ọkwa a na okpomọkụ dị elu karịa 300 ℃ (570f) ma ọ bụ ọnọdụ dị oke ala. Ọ nwere ezigbo mmebi nke ikuku na diluted acid ma ọ bụ nnu. Ya corrosion eguzogide bụ otu ihe ahụ dị ka nke 304 na 430. 630/632 e ọtụtụ-eji na valvụ, aro, chemical eriri ụlọ ọrụ na elu ike akụkụ na ụfọdụ corrosion eguzogide chọrọ. Ọdịdị usoro ihe eji eme ihe: njirimara njirimara bụ ụdị ụdị mmiri ozuzo.
Ngwa: eji maka imepụta akụkụ nwere nnukwu corrosion na-eguzogide ya na ike dị elu, dị ka bearings na uzuoku turbine akụkụ.
Product aha: 05cr17ni4cu4nb
7-4ph alloy bụ ihe akpakọtara, sie ike na martensitic igwe anaghị agba nchara esịnede ọla kọpa na niobium / columbium.
Njirimara: mgbe ọgwụgwọ ọgwụgwọ gasịrị, ihe ndị na-arụ ọrụ nke ngwaahịa ndị ahụ zuru oke, na ike mkpakọ nwere ike iru dị ka 1100-1300 MPa (160-190 Ksi). Enweghị ike iji ọkwa a na okpomọkụ dị elu karịa 300 ℃ (572 Fahrenheit) ma ọ bụ ọnọdụ dị oke ala. Ọ nwere ezigbo mmebi nke ikuku na diluted acid ma ọ bụ nnu. Ya corrosion eguzogide bụ otu ihe ahụ dị ka nke 304 na 430.
17-4PH bụ martensitic ọdịda ekwesi igwe anaghị agba nchara. Omume 17-4PH dị mfe iji dozie ogo ike, nke nwere ike gbanwee site na ịgbanwe usoro ọgwụgwọ ọkụ. Isi ihe na-ewusi ike bụ mgbanwe nke martensitic na ọdịda mmiri na-eme ka mmiri zoo site na ịka nká. Ngwongwo nke 17-4PH dị mma, nkwụsị ike ọgwụgwụ nke corrosion na nkwụsị mmiri na-eguzogide siri ike.
· Osimiri n'elu ikpo okwu, HELIDECK, nyiwe ndị ọzọ
· Ulo oru nri
· Pulp na akwụkwọ ụlọ ọrụ
· Aerospace (tobaim agụba)
· Mechanical akụkụ
· Ngwurugwu nuklia
Nke gara aga: Locomotive Braking Nguzogide ụdị
Osote: Mkpa Wide warara maka Gas Clean-elu
Alloy Steel corrosion Nguzogide
Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Alloy Steel
High corrosion Nguzogide Steel
Elu okpomọkụ Alloy Steel
Elu okpomọkụ eguzogide ọgwụ Steel Manufacturer
Hot akpọrepu Alloy Steel Waya Mkpanaka
Invar Steel Njirimara
Ultra Free-ịcha igwe anaghị agba nchara waya maka Bal ...
N'ogbe High okpomọkụ Ọdụdọ Waya, Electric Heating Waya, Electric okpomọkụ Waya, Electric eguzogide Waya, Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Ọdụdọ Waya, Electric Heating mmewere Waya Supplier,